In the first look, Pixie Gold might look likea8 reel slot with four reels in the middle being highlighted. But in reality, there are only five reels in all. This confusing pattern might be tricky to look at, but once the reels start spinning everything becomes clear! There is nothing complicated about this slot, it only hasaunique design to please your eyes. သင်ရုံရက်ကြောင့်မှားယွင်း၏နေရာချထားဖို့အသုံးပြုရနျလိုအပျ. ရှိပါတယ် 1296 အနိုင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေ, ကျွန်တော်တို့ paylines အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါတစ်ဦးထူးဆန်းအရေအတွက်ရာဖြစ်ပါသည်.
အဓိကရက်ကြောင့်မှားယွင်းအလယ်၌ရှိကြ၏, သောအရေအတွက်လေးရှိပါတယ်, နှင့်လည်းသူတို့ကိုလေးသင်္ကေတများ. ဤရွေ့ကားလေးရက်ကြောင့်မှားယွင်း ONE ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအဖြစ်မှတ်ယူကြသည်, သူတို့တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်ကွဲပြားခြားနားသောသင်္ကေတများသော်လည်း. ဘက်ခြမ်းမှာအခြားရက်ကြောင့်မှားယွင်း၏အာကာသရှိသည်3သင်္ကေတများ. အဆိုပါလှည့်ကွက်ကဒီမှာလာ! ဒါကြောင့်, ကသာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်5အလယ်၌တဦးတည်းကိုအဓိကရက်ကြောင့်မှားယွင်း - slot က reels, အသီးအသီးဘက်မှာနှစ်ယောက်. သငျသညျနှစျ 1st အပေါ်သင်္ကေတများနှင့် 3rd ရက်ကြောင့်မှားယွင်းရလာသောအခါတစ်ဦးကသုံးသင်္ကေတအနိုင်ရရှိထိ​​ု့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်အလယ်တန်းရက်ကြောင့်မှားယွင်းတွင်မဆိုတူညီသောသင်္ကေတ. ဖြစ်နိုင်ခြေခြောမြင့်မားသည်, တစ်ဦးကိုက်ညီခြင်းသင်္ကေတကိုသာလေး-အလယ်ရက်ကြောင့်မှားယွင်းအတွက်တစ်ကြိမ်ပေါ်လာဖို့ရှိပါတယ်အခါ,.
Pixie ရွှေဒီမှာရိုင်းသောသင်္ကေတဖြစ်ပါသည်, နှင့်ဤဆံပင်ရွှေရောင်နတ်သမီးသာကောင်းသောသတင်းအတွက်တတ်၏. သူမသည်ရှငျဘုရငျစတားသင်္ကေတများ မှလွဲ. အားလုံးသင်္ကေတများအစားထိုးနိုင်. ဒီရိုင်းသောသင်္ကေတကိုသာ 3rd ရက်ကြောင့်မှားယွင်း၌ထင်ရှားနိုင်, လွန်းသာသောအခြေဂိမ်းထဲမှာ. But the main feature you will love is the free spins feature. You might only get ONE free spin atatime, but that is not something to be disappointed about because it can be re-triggered! A tiny mouse will be seen at the bottom of the reels always carryingacart, which is definitelyacute sight. The mouse randomly stops with his cart underareel, and if that reel has the King Star symbol, then you getafree spin. While all these cute things are on, ရိုင်းသင်္ကေတလည်းဒုတိယသို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အပိုဆောင်းကံကောင်းခြင်းထဲမှာရောက်စေဖို့တတိယရက်ကြောင့်မှားယွင်းအပေါ်အသွင်အပြင်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်!
Pixie ရွှေတခုလွယ်ကူသောဂိမ်းတစ်ခုနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာ layout ကိုအတူ slot ကဖြစ်ပါတယ်! Layout အပြင်အဆင်သင်သည်ငွေသားအမြောက်အမြားနှင့်အတူထွက်လမ်းလျှောက်စေခြင်းငှါ, အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်! ဒါကြောင့်ယခု play နှင့်အကောင်းဆုံးတွေ့ကြုံ!